बिरालोले गर्दैछ भविष्यवाणी: यो पटकको विश्वकप कसले जित्ला? – USNEPALNEWS.COM
बिरालोले गर्दैछ भविष्यवाणी: यो पटकको विश्वकप कसले जित्ला?
यो पटकको विश्वकप फुटबल कसले जित्ला ? मानिसहरु आ–आफ्नै भविष्यवाणी गरिरहेका छन् । विश्वकप नजिकिर्द गर्दा विभिन्न टिमका समर्थकहरुले सामाजिक सञ्जाल रंगाउन थालेका छन् ।
म्युजियममा उसको हेरचाहको जिम्मा पाएकी अन्ना कासातकिना भन्छिन्,‘यसअघि एकिलिजले कन्फडेरेसन कपको पनि भविष्यवाणी गरेको थियो । जसमा उसले गरेका भविष्यवाणी शत प्रतिशत मेल खायो । ऊ कान नसुन्ने भएकाले पनि निष्पक्ष भविष्यवाणी गर्ने गर्छ । कान नसुन्ने भएकाले बाहिरबाट उसको ध्यानभंग पनि कसैले गर्न सक्दैन र उसले आफ्नो हृदयले सही भविष्यवाणी गर्नेछ ।’
by सुशन घिमिरे	 October 11, 2017